သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာ Investing
ဒီသီးခွားမူဝါဒ ( "ပေါ်လစီ") 103 Sham ဖုန်ကြားရှင် Tong ပလာဇာ, ဗစ်တိုးရီးယား, မာဟေး, ဆေးရှဲ (ဘယ်လို investingstockonline.com ဖော်ပြထားတယ်"ကုမ္ပဏီ,""ငါတို့သည်"နှင့်"ကျွန်တော်တို့၏") လုပ်ငန်းစဉ်များ, စုဆောင်း, အသုံးပြုမှုနှင့်ရှယ်ယာပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုဤ website တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ https://investingstockonline.com/ (ထို "ဆိုက်ကို") ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါနှင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဒေတာကို process ပါလိမ့်မယ်ပေးပါ။
ကျနော်တို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပါအဝင်ပုံစံများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးအတွက်သင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းပါ။ ဤပေါ်လစီများတွင်အသုံးပြုသကဲ့သို့ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ" အထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်း, ဤဥပမာ, အပါအဝင်တစ်ဦးချင်းအဖြစ်သငျသညျဖျောပွသောဖြစ်စေတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက် process သည်အခြားသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်မဆိုသတင်းအချက်အလက်လည်းပါဝင်သည် သင့်အမည်, စာတိုက်လိပ်စာ, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်။
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုလိုအပ်သလဲ?
ကျနော်တို့သာသက်ဆိုင်သည့်ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy ဥပဒေများနှင့်အညီသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာကို process ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမှတ်ပုံတင်လျှင်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုကိုရယူကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူရန်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုသဘောတူရန် tick ဖို့တောင်းခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ ဤသဘောတူညီချက်ငါတို့သည်သင်တို့၏ data တွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးရန်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရလိုအပ်သည့်ဥပဒေရေးရာအခြေခံနှင့်ငါတို့ကိုပေးသည်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ သင်ဤပေါ်လစီနှင့်အညီသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုရန်သဘောတူမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမသုံးကြဘူးပါ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့ကို Give ပြန်ကြားရေး။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်:
သင့်အမည်, စာတိုက်လိပ်စာ, အီးမေးလ်လိပ်စာ, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်, username နှင့် password များအပါအဝင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုသုံးစွဲဖို့မှတ်ပုံတင်ရန်အခါသင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ,
မည်သည့်ဗီဒီယို, မှတ်ချက်သို့မဟုတ်သင်ဆိုက်ကိုမှ upload သို့မဟုတ် post ကိုအခြားတင်သွင်းခဲ့တဲ့တွင်ပါရှိသောစေခြင်းငှါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ;
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်နှင့်ကျွန်တော်ဆိုက်ပေါ်မှာ run သည်အခြားပရိုမိုးရှင်းနှင့် ဆက်စပ်. များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ;
လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ဆိုဒ်များကနေ [ပြန်ကြားရေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင် social networking site များ (တစ်ဦးချင်းစီကို "SNS") နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြု interfaces ပါဝင်သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုမှတဆင့်တစ်ဦး SNS ချိတ်ဆက်. လျှင်, သင်ဝင်ရောက်ခွင့်, အသုံးပြုမှုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုရန်နှင့်သင် SNS ကြောင်း SNS ပေါ်တွင်သင်၏အပြင်အဆင်များအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းထား။ ငါတို့သည်ဤပေါ်လစီနှင့်အညီ, access ကိုသုံးပါနှင့်သတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ SNS ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့် settings ကိုအတွင်းထဲကသင့်တော်တဲ့ setting များကိုပြင်ဆင်ရေးအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သင်ဤလမ်းအတွက်ပေးသတင်းအချက်အလက်များမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ access ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
[ပြန်ကြားရေးအလိုအလျောက်စုဆောင်းပါသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကိုအလိုအလျောက်သင်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် log ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာဥပမာ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device ကို operating system ကိုအမည်နှင့်ဗားရှင်း, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်မော်ဒယ် browser ကိုအမျိုးအစား, browser ကိုဘာသာစကား, screen resolution ကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုမှ browsing မတိုင်မီသွားရောက်လည်ပတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်, သင်ကြည့်ရှုအားပေးစာမျက်နှာများ, အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး log သငျသညျ, စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအပေါ်လုပ်ရပ်များအကြောင်းကိုလက်လှမ်းကြိမ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်နေခဲ့ရသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ cookies တွေကိုသုံးပြီးအကြောင်းကိုဤအချက်အလက်စုဆောင်းပါ။
ကျနော်တို့ automated ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုမသုံးကြဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့သင်အကြောင်းကြားနှင့်ကန့်ကွက်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူသငျသညျပေးလတံ့သောအမှု၌ပညတ်တရားအားဖြင့်ချမှတ်ထားတာဝန်ဝတ္တရား, ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အဲဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျနော်တို့ကို အသုံးပြု. သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းဖြစ်နိုင်သည် "cookies တွေကို။ " ကွတ်ကီး website တစ်ခုအားဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ hard drive ပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသေးငယ်တဲ့ဒေတာဖိုင်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အပြန်အလှန်အတှေ့အကွုံအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး session တစ်ခု (သင်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုပိတ်လိုက်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးသော) cookies နဲ့ (သင်ကသူတို့ကို delete သည်အထိသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုအပေါ်နေဖို့ရာ) persistent cookies များကိုနှစ်ဦးစလုံးသုံးနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုတှငျပွနျလညျရသောအခါသင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်သာကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုသောထားတဲ့မိုဘိုင်း device ကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်, (1) ပထမဦးဆုံးပါတီ cookies များကို; ကျနော်တို့ cookies တွေကိုနှစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးအစားကိုသုံးပါ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device ကိုအသိအမှတျပွုထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုပေးအသုံးပြုသောနိုင်သည့် (2) တတိယပါတီ cookies များကို။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထွက်သတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookies တွေကို၏အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုသည်:
ဤရွေ့ကား cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမှတဆင့်ရရှိနိုင်န်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနှင့်၎င်း၏ features တချို့ကိုသုံးစွဲဖို့သငျသညျကို enable မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ [ဥပမာ, သူတို့သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုဒေသများတွင်လုံခြုံနှငျ့သငျလျင်မြန်စွာဝန်ကိုတောင်းဆိုစာမျက်နှာများများ၏ content ကိုကူညီဝငျရောကျဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ဒီကွတ်ကီးတွေကိုမရှိရင်သင်တို့အဘို့တောင်းသောဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးမရနိုငျနှင့်သာထိုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသောဤ cookies များကိုအသုံးပြုပါ။
ဤရွေ့ကား cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကို [ဤကဲ့သို့သော, သင်၏ဘာသာစကားဦးစားပေးသတိရသင်၏ login အသေးစိတ်ကိုမှတ်မိနှင့်သင်စိတ်ကြိုက်နိုင်သည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကို၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများရန်သင့်အားစေပြောင်းလဲမှုများသတိရအဖြစ်] သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဖြစ်စေရွေးချယ်မှု, သတိရဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ဒီကွတ်ကီးတွေကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးထက်ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသငျသညျပေးဖို့နဲ့သငျသညျ re-ရိုက်ထည့်ပါကသင်၏ဦးစားပေးလုပ်ဖို့ရှိခြင်းသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်အခါတိုင်းရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကား cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုနှင့်မည်သို့အသုံးပြုသူများကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ယာဉ်အသွားအလာနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်အသုံးပြုကြသည်။ ကိုစုဝေးစေသတင်းအချက်အလက်များမဆိုတစ်ဦးချင်းစီဧည့်သည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်မထားဘူး။ [ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမှဧည့်သည်များ၏နံပါတ်လည်းပါဝင်သည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသူတို့ကိုရည်ညွှန်းသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ, စာမျက်နှာများတွင်မိမိတို့မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလည်ပတ်မှုနှင့်အခြားအလားတူသတင်းအချက်အလက်နေ့၏ဘယျအခြိနျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုအပေါ်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ] [ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုစည်းရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအပေါ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်စောင့်ကြည့်ဖို့, ပိုမိုထိရောက်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလည်ပတ်ကူညီရန်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။
[ငါတို့သည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် Google Analytics မှသုံးပါ။ Google Analytics သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကိုယ်ကသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။ သင်ဒီမှာက Google Analytics မှ cookies များကိုအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies]
[သငျသညျကို Google ကဒီမှာသင့်ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်ပေးသည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.]
[သငျတို့၏ဆိုက်ကိုသင်တို့၏အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း Google Analytics ၏အသုံးပြုမှုကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ နှင့်ဤ link ကိုကနေတဆင့်ရရှိနိုင် browser ကို plugin ကို install လုပ်ပါ: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB]
ပစ်မှတ်ထားနှင့်ကြော်ငြာ cookies တွေကို
[ဤရွေ့ကား cookies များကိုသင်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်ဖြစ်သောကြော်ငြာပြသနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable ရန်သင့် browsing အတွက်အလေ့အထများကိုခြေရာခံ။ ဤရွေ့ကား cookies များကိုဆင်တူအကျိုးစီးပွားရှိသည်သောအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူအုပ်စုသင်သည်သင်၏ browsing history အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ သတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး, ငါတို့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်, တတိယပါတီကြော်ငြာရှင်များအကြှနျုပျတို့သညျတတိယပါတီကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရှိနေစဉ်သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ထားတဲ့ကြော်ငြာကိုပြသသူတို့ကို enable ကွတ်ကီးထားနိုင်ပါတယ်။ ]
[သငျသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုမှာသင့်ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်းအလေ့အထနှင့်ပစ်မှတ်ကြော်ငြာကိုမှတ်မိထားတဲ့ cookies တွေကို disable နိုင်ပါတယ် http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices။ သငျသညျလျာထားသောသို့မဟုတ်ကြော်ငြာ cookies များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရွေးချယ်ပါက, သင်ဆဲကြော်ငြာမြင်ရပါလိမ့်မည်ဒါပေမဲ့သူတို့သငျသညျမှသက်ဆိုင်ရာမည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျအထကျပါလင့်ခ်မှာဖော်ပြထားကုမ္ပဏီများက cookies များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှေးခယျြဘူးဆိုရင်တောင်, အွန်လိုင်းအပြုအမူကြော်ငြာအစေခံမအားလုံးကုမ္ပဏီများမှဒီ list ထဲမှာထည့်သွင်းနေကြတယ်, ဒါကြောင့်သင်ဆဲစာရင်းမဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများမှထံမှအချို့သော cookies နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြော်ငြာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ]
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုအပေါ်ခလုတ်သို့မဟုတ်သင်သင့်အကောင့်လင့်ထားသည်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Facebook, Twitter သို့မဟုတ် Google+ အဖြစ်လူမှုကွန်ရက်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ "ကဲ့သို့" ဟုလူမှုမီဒီယာခွဲဝေမှုခလုတ်ကိုသို့မဟုတ် အသုံးပြု. သတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှတဲ့အခါမှာ [အဲဒီ cookies တွေကိုအသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါလူမှုကွန်ယက်သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်။
cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့
သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်သင့် browser setting ကိုမှတဆင့် cookies များကိုပယ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဤသို့ပြုနိုင်ရန်အတွက်, (များသောအားဖြင့်က "setting များကို", "အကူအညီနဲ့" "tools များ" သို့မဟုတ် "ပြင်ဆင်ရန်" စက်ရုံအတွင်းတည်ရှိသည်) သင့် browser အားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ အတော်များများက browser များသင့် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်သည်အထိ cookies များကိုလက်ခံရန်သတ်မှတ်ထားကြသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ cookies များကိုလက်မခံကြဘူးဆိုရငျ, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ကိုသင်တို့၏အသုံးပြုမှုတချို့အဆင်မပြေတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်နှင့်သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတိုင်းအချိန်အတွက် log ဖို့လိုအပ်ပေမည်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့ဆိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အသုံးပြုတဲ့အခါ Third-party ကြော်ငြာများအစေခံရန်အခြားကုမ္ပဏီများသုံးနိုင်ပါသည်။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကစုဆောင်းစီးသတင်းအချက်အလက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအသုံးပြု browser ကိုအမျိုးအစား, အချိန်နှင့်ရက်စွဲ, ကြော်ငြာများ၏ဘာသာရပ်နှိပ်လိုက်သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သင်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ဖွယ်ရှိန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ကြော်ငြာများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဆိုက်ကိုနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှသင့်ထံလာရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်းကျော် scrolled လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအချက်အလက်စုဆောင်းဖို့ခြေရာခံနည်းပညာများကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ရဲ့ခြေရာခံနည်းပညာများ၏အခြားကုမ္ပဏီများ '' အသုံးပြုမှုကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးမူဝါဒများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုသုံးနိုင်ပါသည်:
, operate ထိန်းသိမ်းရန်, ငါတို့ဆိုက်ကို, ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေခြင်းငှါ၎င်း,
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင် account တစ်ခုရှိပါက, သင့်အကောင့်နှင့် ပတ်သက်. သင်တို့နှင့်အတူအဆက်သွယ်ဖို့အပါအဝင်သင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်,
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ, နောက်ဆုံးသတင်းများ, လုံခြုံရေးသတိပေးချက်များ, နှင့်ထောက်ခံမှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျများအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ဖို့;
သင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့နှင့် affiliates ကကမ်းလှမ်းထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်လာမည့်ပရိုမိုးရှင်းများ, နှင့်အခြားသောသတင်းများ, အကြောင်းကို e-mail စျေးကွက်သင်ပို့။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိ၏ထွက်ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ: "။ ရွေးချယ်ထွက်" ဒီလိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များကိုဘယ်လိုရန်သင့်အားပြောပြကျနော်တို့နေဆဲသင်သည် Non-စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များကိုပေးပို့စေခြင်းငှါ, သင်တို့ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိမှရှောင်ဖယ်လျှင်ပင်, ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ non-စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များကျွန်တော်တို့ကို (သင်တဦးတည်းရှိပါက) နှင့်သင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဆက်ဆံရာတွင်သူတို့နှင့်သင့်အကောင့်အကြောင်းကိုအီးမေးလ်များပါဝင်သည်;
ကျနော်တို့လိုအပ်သောသို့မဟုတ်သင့်လျော်သောယုံကြည်အဖြစ် (က) တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းငှါ၎င်း, (ခ) အေပျတောင်းဆိုမှုများနှင့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်လျောဖို့, အများပြည်သူနှင့်အစိုးရအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်အပါအဝင်; (ဂ) ကြှနျုပျတို့၏မူဝါဒပြဋ္ဌာန်းရန်ခြင်းငှါ၎င်း, နှင့် (ဃ) ကြှနျုပျတို့၏အခွင့်အရေး, privacy ကို, လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်သို့မဟုတ်အခြားသူများ၏ရန်,
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဒ်မက "သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမျှဝေခြင်း" တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data share နိုင်ပါသည်:
သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ Designated တတိယပါတီများ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးအပ်ခဲ့ကြရှိရာတတိယပါတီများနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ တတိယပါတီ Service Providers။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော [data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်အခြေခံအဆောက်အအုံပြဌာန်းချက်, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, အီးမေးလ်ပေးပို့, စာရင်းစစ်များနှင့်အခြားအလားတူန်ဆောင်မှု] အဖြစ်န်ဆောင်မှုများပေးတော်မူသောငါတို့၏တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်မှလင့်များင်နိုင်ပါသည်။ [ ဒါကပေါ်လစီထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီများ၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်ကိုဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။ ဤတတိယပါတီများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများရှိသည်နှင့်သူတို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်များ, အင်္ဂါရပ်တွေသို့မဟုတ်မူဝါဒများအဘို့မဆိုတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုကိုလကျမခံပါဘူး။ သငျသညျထိုသူတို့အားမည်သည့်ဒေတာများတင်သွင်းမတိုင်မီသူတို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒများဖတ်ရှုပါ။ [
သငျသညျအသုံးပြုသူတင်သွင်းတဲ့အခါသင်ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမှအကြောင်းအရာများနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေး data share ပေမည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင် post သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်မဆိုသတင်းအချက်အလက်အများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သတိပြုပါ, ငါတို့ဆိုက်ကို၏အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အထွေထွေအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပေါ်တွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ, သို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာအလွန်သတိထားရန်သင့်အားတိုက်တွန်းကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်တခါဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာများနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
International Data လွှဲပြောင်း
ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်စုဆောင်းကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာအပါအဝင်သင့်အချက်အလက်များကို, လွှဲပြောင်းမှာသိမ်းဆည်းထားနှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy စည်းမျဉ်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများထဲမှာရှိသကဲ့သို့အကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တူညီသောအဆင့်ကိုမပူဇော်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်သငျသညျနထေိုငျသောတိုင်းပြည်ပြင်ပကိုလုပ်ငန်းများ၌စေခြင်းငှါ ကမ္ဘာကြီးကို။ ဤပေါ်လစီကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်, သင်သည်ဤလွှဲပြောင်း, သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့သဘောတူသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ data တွေကိုလုံလုံခြုံခြုံနှင့်ဤပေါ်လစီနှင့်အညီပြုမူဆက်ဆံကြောင်းသေချာစေရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောအားလုံးခြေလှမ်းများယူပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကအတွင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်, အဖွဲ့အစည်းနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအစီအမံများကိုအသုံးပြုရန်ရှာကြာလော့။ ကံမကောင်းစွာမရှိဂီယာသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုစနစ်ကလုံးဝလုံခြုံဖြစ်အာမခံနိုင်ပါသည်, ထိုအင်တာနက်ကနေတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ဂီယာလုံးဝလုံခြုံဘူး။ သငျသညျ (သငျကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရှိစေခြင်းငှါမဆိုအကောင့်လုံခြုံရေးစိတ်မချရလျက်ရှိသည်ဟုခံစားရလျှင်, ဥပမာများအတွက်) ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အပြန်အလှန်မရှိတော့လုံခြုံကြောင်းယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိပါကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ပြဿနာကိုအကြောင်းကြားပေးပါ။
ကျနော်တို့သာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မယ် သင် s ကိုသုံးစွဲဖို့အတှကျအသရွေ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်ite
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကို / 16 နှစ်အောက်ကလေးများညွှန်ကြားကြသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတစ်ဦးသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူသည်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏ကလေးသည်မိမိတို့၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးတော်မူကြောင်းကိုသတိပြုမိဖြစ်လာပါက, သူသို့မဟုတ်သူမကိုအဆက်သွယ်သင့်သည်။ ငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီကျိုးကြောင်းဆီလျော်လက်တွေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်များမှထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘေးဖယ်နေသည်။ သငျသညျကိုထွက်ရွေးချယ်ဖို့အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖြစ်နိုင်သည်: (ဈ) တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေး; (ii) automated ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့် / သို့မဟုတ်ပရိုဖိုင်ကို; (iii) အထိခိုက်မခံပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု, (ဃ) ကြှနျုပျတို့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ထွက်သယ်ဆောင်စေခြင်းငှါသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏မည်သည့်သစ်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့; သို့မဟုတ် (v) အဓနသဟာယပြင်ပတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအရွှေ့။ ဆိုက်တချို့၏သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုဘေးဖယ်ထုတ်အပေါ်သို့ထိရောက်မှုဖြစ်မည်အကြောင်းသတိပြုပါ။
Access ကို။ သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်း / အကောင့်ကနေတဆင့်ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်အကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုကိုင်သတင်းအချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။
ပြုပြင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာအတွက်မဆိုတိကို update သို့မဟုတ်ပြင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ရွှေ့ပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုခရီးဆောင်ဖြစ်ပါသည် - သင်ဆိုလိုသည်မှာသင်ဆန္ဒရှိကဲ့သို့သောအခြားဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့သင့်ရဲ့ဒေတာကိုရွှေ့ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
Erase နဲ့မေ့လျော့။ အကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုကိုင်သတင်းအချက်အလက်များမရှိတော့သက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်မမှန်ကန်သည့်အခါအချို့သောအခြေအနေများတွင်ဥပမာ, သငျသညျငါတို့သည်သင်တို့၏ data တွေကိုဖျက်ပစ်ကြောင်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင်တို့သည်ဤအခွင့်အရေးများကိုမဆိုလေ့ကျင့်ခန်းလိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ကျေးဇူးပြုပြီး: (ဈ) ဘာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိ၏ နှင့် (ii) အထက်ပါအခွင့်အရေးပေးသော သငျသညျပြဋ္ဌာန်းရန်လိုသည်။ သင့်ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဘို့, သာသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြကိုပေးပို့ဖို့သုံးပြီး, ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်မီသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်သောအထူးသဖြင့်အီးမေးလိပ်စာတွေနဲ့ဆက်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလေးစားမှုနှင့်အတူတောင်းဆိုမှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်ကို၏တစ်လအတွင်းမှာအဖြစ်မကြာမီကျိုးကြောင်းဆီလျော်လက်တွေ့နှင့်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့လိုက်လျောဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ recordkeeping ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သေချာသောသတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုဖို့ကြိုတင်စတင်ခဲ့ကြောင်းမည်သည့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပြီးစီးရန်သတိပြုပါ။
ကြှနျုပျတို့မှာ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်တိုင်ကြားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျူးလွန်။ info@investingstockonline.com: သင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ်. ၌ဤပေါ်လစီသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေ့အကျင့်နှင့်စပ်လျဉ်းတိုင်ကြားချက်စေလိုပါလျှင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ 30 ရက်အတွင်းအဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှနှင့်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့သင့်ရဲ့တိုင်ကြားချက် reply ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဆိုတိုင်ကြားချက်ကိုဖြေရှင်းဖို့မျှော်လင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုမှဆောင်ခဲ့သဖြင့်, သင်သည်သင်၏တိုင်ကြားချက်လုံလောက်စွာဖြေရှင်းရသေးဟုခံစားရသို့သော်လျှင်, သင်သည်သင်၏ဒေသခံဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာကိုဆက်သွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်း
ငါတို့သည်သင်တို့၏မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ဤပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုကြိုဆိုပါတယ်။ သငျသညျမှာရေးသားခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်စေခြင်းငှါ info@investingstockonline.com